Sony ILCE-7M3K (SEL-2870) Camera Body OnlyK4,077,000
Sony ILCE-7M3 Camera (Body Only)K3,756,000
Sony ILCE-7RM3 Camera (Body Only)K5,307,000
Sony a6400 Mirrorless Camera With 16-50mm LensK2,268,000
Sony ZV-E10 Interchangeable-Lens Vlog Camera (Black)K1,969,000
Up to 21% OFF and Free Gift - Until End of January
Sony ILCE-7M3K (SEL-2870) Camera Body Only
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Free Gift: SF-E64+NP-FZ100 24.2MP5 35-mm full-frame CMOS sensor with back-illuminated design Sensitivity range up to ISO 51200 (expandable to ISO 50-204800 for stills) Fast Hybrid AF with...
Sony ILCE-7M3 Camera (Body Only)
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Free Gift: NP-FZ100 Advanced 24.2MP Back-Illuminated 35mm Full-frame Image Sensor 15-stop4 dynamic range, 14-bit uncompressed RAW4, ISO 50 to 204,800 Up to 10fps1 Silent5 or Mechanical Shutter...
Sony ILCE-7RM3 Camera (Body Only)
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Free Gift: NP-FZ100+SF-G64T Spectacular 42.4MP full-frame resolution w/ evolved image processing Up to 10fps1 Silent or Mechanical Shutter with AE/AF tracking Incredible autofocus: 399 phase-detection / 425...
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Free Gift: LCS-BDM Model: ILCE-6400L (SELP-1650) 24.2MP APS-C Exmor CMOS Sensor BIONZ X Image Processor Real-Time Eye AF & Real-Time Tracking XGA Tru-Finder 2.36m-Dot OLED EVF 3.0"...
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Free Gift:SF-E64+LCS-BDM Model: ZV-E10 LENS MOUNT: E-mount ASPECT RATIO: 3:2 NUMBER OF PIXELS (EFFECTIVE): Approx. 24.2 megapixels NUMBER OF PIXELS (TOTAL): Approx. 25.0 megapixels SENSOR TYPE: APS-C...
Sony ZV-E10 Interchangeable-Lens Vlog Camera (White)
Sony DSC-W800/B 20.1 MP Compact Camera (Black)
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Free Gift: LCS-BDG Model: DSC-W800/B Super HAD CCD 20.1 MP sensor Sony lens with 5x optical zoom HD video capability for beautiful videos Sweep Panorama to capture...
Sony DSC-W830/S 20.1MP Compact Camera (Silver)
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Free Gift: LCS-BDG Model: DSC-W830/S 20.1 megapixel plus 8x optical zoom captures detailed subjects Capture your videos in 720p HD Movie mode¹ Creative shooting with Picture and...
Sony DSC-W830/B 20.1MP Compact Camera (Black)
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Free Gift: LCS-BDG Model: DSC-W830/B 20.1 megapixel plus 8x optical zoom captures detailed subjects Capture your videos in 720p HD Movie mode¹ Creative shooting with Picture and...
Sony DSC-RX100M6 20.1 MP Cyber-Shot Digital Camera
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Free Gift: LCS-BDM Model: DSC-RX100M6 SENSOR TYPE: 1.0-type (13.2mm x 8.8mm) Exmor RS CMOS sensor, aspect ratio 3:2 NUMBER OF PIXELS (EFFECTIVE): Approx. 20.1 Megapixels LENS TYPE:...
Sony DSC-RX100M7G 20.1 MP Cyber-Shot Digital Camera With Shooting Grip Kit
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Free Gift: LCS-BDM Model: DSC-RX100M7G 20.1MP 1" Exmor RS BSI CMOS Sensor BIONZ X Image Processor & Front-End LSI ZEISS Vario-Sonnar T* f/2.8-4.5 Lens 24-200mm (35mm Equivalent)...
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Made for Iphone7plus, Iphone 7, Iphone 6s Plus, Iphone 6s, Iphone6Plus, Iphone 6. Lens F2.0 Resolution 3040 x 1520 Storage medium TF card...
Panasonic Lumix Digital Mirrorless Camera DMC-GX85K (Black)
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Brand: Panasonic Colour: Black Type: Digital Single Lens Mirrorless camera Image Sensor Size: 17.3 x 13.0 mm (in 4:3 aspect ratio) Camera effective pixel: 16.00 Megapixels Aspect...
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Video Input Re-Sync: On all4HDMI inputs. Frame Rate and Format Converters: On all4HDMI inputs. HDMI Program Outputs: 1 Ethernet: Ethernet supports 10/100/1000 BaseT...
Blackmagic Design ATEM Mini (Black)
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Video Input Re-Sync: On all4HDMI inputs Frame Rate and Format Converters: On all4HDMI inputs HDMI Program Outputs: 1 Ethernet: Ethernet supports 10/100 BaseT...